सम्मोहनः एक प्रतिनायकको अन्तरकथा - Everest Talk
सम्मोहनः एक प्रतिनायकको अन्तरकथा1 min read
भुवनसिंह कार्कीले मेरो प्राक्कल्पनालाई गलत सिद्ध गरिदिएका छन् । उनले “सम्मोहन” मा जुन विषय उठाएका छन्, र त्यसलाई जुन मानविन्दुहरूका आधारमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो उनको उमेर र अनुभावका आधारमा मात्रै व्याख्यातित हुँदैन ।
महेश पौड्याल by
२०७७, १५ बैशाख सोमबार ०९:१०
in एभरेष्ट टक विशेष, मुख्य समाचार, साहित्य
“सम्मोहन” सत्र वर्षीय किशोर भुनवसिंह कार्कीको उपन्यास हो । हुन त कुनै पनि सिर्जनाको मूल्याङ्कन उमेरको सापेक्षतामा गरिनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित काम होइन, तर म यहाँ यसो गर्न एक विशेष प्रयोजनका लागि बाध्य भएको हुँ । बालबालिका, किशोर र युवाहरूसँग सिर्जनाको क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको अनुभव धेरथोर छ मसँग । करिब दुई दशकदेखिको यो मेरो व्यसनने मलाई एउटा प्राककल्पनामा विश्वास गर्न सिकाएको थियो — किशोर वा युवाहरू आफ्नै उमेर र अनुभवभित्र सिर्जनाको पट सजाउँछन्, र त्यसै जगमा देखिएको निखार वा सौन्दर्यचेतका आधारमा उनीहरूको मेधा जाँच्नुपर्ने हुन्छ । तर होइन रहेछ । भुवनसिंह कार्कीले मेरो प्राक्कल्पनालाई गलत सिद्ध गरिदिएका छन् । उनले “सम्मोहन” मा जुन विषय उठाएका छन्, र त्यसलाई जुन मानविन्दुहरूका आधारमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो उनको उमेर र अनुभावका आधारमा मात्रै व्याख्यातित हुँदैन । हुन त “सम्मोहन” भित्र आफ्नै खाले सीमा र समस्या यथेष्ट छन्, तर ती सीमा र समस्या पनि उनको उमेर र अनुभावका कसीमा व्याख्यातित हुँदैनन् । त्यसैले म एउटा अनौठो अनुभवको सँघारमा उभिएको छु । कतिपय सीमा र समस्या कर्ताको निजी सीमा समस्याभन्दा धेरै माथि छन् भने, तिनमा एउटा छुट्टै सौन्दर्य र कलात्मक उचाइ विद्यमान हुने रहेछ ।
“सम्मोहन” मूलतः एउटा पत्रकारको दृष्टिविन्दुबाट खिचिएको काठमाडौँको एक विसङ्गत कथा हो । नाम नखुलाइएको कुनै दुर्गम जिल्लाबाट भविष्य खोज्न काठमाडौँ हिँडेको रमेश आफ्नी प्रेयसी रूपालाई गाउँमै छोडेर हिँड्छ । उसले एउटा रुमाल र औँठी चिनो दिएर आफू छिठै आउने र उतै लाने वाचा पनि गरेको हुन्छ । उनीहरूकाु सम्बन्धको गाइँगुइँ चलिसकेको गाउँमा रूपालाई एक्लै बाँच्न सकस हुन्छ । यसैबीच कुनै धनाड्य वसुनाथ काजीको छोरा र उसको समूहले उसको प्रतिष्ठा मात्रै होइन अस्मिता पनि लुट्छन् र बलात्कार गरेर छोड्दिन्छन् । घटनापछि बसेको ग्रमभेलाले धनाड्यको छोरालाई सफाइ दिन्छ र घटना रूपाकै उक्साहटमा भएको हो भनेर उसैलाई दोषी ठह¥याउँछ । यो पीडाबाट आहत आमाको उसै दिन देहावसान हुन्छ । बा पहिल्यै बितिसकेका छन् । अब बाआमा दुवै गुमाएकी र बलात्कृत भएकी विक्षिप्त रूपाले भने रमेशको रुमाल र औँठी उनीहरूकी बालसखा मञ्जरीलाई जिम्मा लाएर, एक चिठी समेत लेखेर आत्महत्या गर्छे । करिब एकवर्षपछि यानि शान्तिावार्ता सुरु भएपछि पुनः जिल्ला पुग्दा रमेशले उनै साथी मञ्जरीबाट रूपाबारे सबै थाहा पाउँछ र उसको औँठी र रुमाल लिएर काठमाडौँ फर्कन्छ । रूपाले मर्नुअघि लेखेको विस्तृत पत्र पनि भेट्छ, र पढ्छ ।
रमेशको जीवनमा रूपाको यो दुःखद अलप, र त्यसले छोडेको गहीरो रिक्तता यस कथाको पुट हो । यो अभाव उसको सम्पूर्ण दृष्टिविन्दुहरूको मियो हो । ऊभित्र घोर निराशाको उदय हुनु र जीवनलाई त्यसै निराशाको कोणबाट घिस्याइरहनु उसको नियति हो । र जीवन, यससँग जोडिएर आउने सपना, भोलिका आशा, सबै सबै फगत एक आस्तित्विक विपर्यास् हुन् उसका लागि । त्यसैले रमेश चुरोट र मदिराको आडमा जीवनबाट एक एक दिन घटाउने एउटा निरर्थक उपक्रममा देखिन्छ । हुन तर ऊ पेसाले पत्रकार हो र एउटा अखबारको सम्पादन पनि गर्छ, तर उसलाई न पत्रकारिताको मर्यादासँग कुनै मतलब छ, न आफ्नै पद, प्रतिष्ठा वा आर्थिक उन्नतिको चिन्ता छ । उसलाई खिइँदै जानुमा मजा छ । मर्दै जानुमा मजा छ । ऊ एउटा आस्तित्विक बोझ हो, आफ्नै लागि पनि ।
रमेशले नबुझेको पनि केही छैन, गर्न सकेको पनि केही छैन । प्रेमको बारेमा दार्शनिकका जस्ता चिन्तन छन् । सम्बन्ध, अरूको पीडा, अबला नारीहरूले जिउनकै लागि गर्नुपरेको सङ्घर्ष र झेल्नुपरेको कहर, सडकमा व्यापार गर्नेहरूका मर्दै बाँच्दै गरेका सपना, बेचिएकाहरूको मुटुछेड काव्य, परेवा–परेवी र बचेराको प्रेम…सबै सबै । प्रेम, पितृत्व, सदाचार, वफादारी, सबै सबै थाह छ । तर ऊ, शेक्सपियरको हेम्लेटजस्तो पात्र हो, जसलाई ब्रह्माण्ड थाह छ, तर गर्न केही सक्दैन । र आफ्नै अकर्मण्यताको खाडलमा परेर मर्छ । मर्न त रमेश मर्दैन, र बाँचेको पनि छैन, बाँच्नुको सही अर्थमा ।
नाममात्रको पत्रकारिता र जिन्दगीसँगको एक आस्तित्विक खेलाँचीकै बीच रमेशले एक दिन उसको पुरानो साथी हरिशलाई रत्नपार्कमा भेट्छ । उनी दुई हरिशको असनस्थित नयाँ रेस्टुराँमा पुग्छन् । रेस्टुराँ उसले तराईतिरको एउटा साथी सोहबसँगको पार्टनरसिपमा खोलेको हो । बैँकको ऋण पनि अहुदी छ । रेस्टुराँमा थुप्रै कर्मचारी छन्, जसमा एक सहयोगी हीरा र एउटी रिसेप्सनिस्ट पनि छन् । त्यहाँ जाने बस्ने क्रममा रमेशलाई हीराको अनुृहारमा आफूले गुमाएकी रूपमा झल्को आउन थाल्छे । हुन त उसलाई त्यहाँकी सुन्दर रिसेप्सनिस्ट पनि मन नपरेकी होइन, तर त्यो एउटा क्षणिक अनुभूति हो । अँ, रेस्टुराँमा आउने तन्नेरीहरूको प्रेमलाप र निर्जल्ल उच्छृङ्खलतामा पनि उसको अनौठो आकर्षण नरहेको होइन, तर उसको अवचेनतले हीरामा उसकी आफ्नी रूपाको प्रतिछाया देखेको छ । ऊ हीरासँग नजिक हुने, झरीमा एउटै छाता ओढेर जाने, कहिलेकाहीँ अरू नै रेस्टराँमा पनि भेट्ने र दुईचारचोटि उसको कोठैमा पनि जाने गरेको छ । तर न हीराले मुख खोल्न सकेकी छे, त उसले केही भन्ने आँट गरेको छ ।
यसैबीच, हरिश भने रेष्टुराँले खासै आम्दानी गर्न नसकेको गुनासो गरिरहन्छ । सुहेब सहकार्यमा इमान्दार नभएको र व्यवहारमा रुखो भएको उसको ठहर छ । यसैबीच दुई घटना एकपछि एक घट्छन् । पहिलो, सुहेबले हीरालाई रिसेप्सनिस्ट बनाएको छ, र पहिलेकी रिसेप्सनिस्टलाई सेक्रेटरी । यसबाट उक्त सेक्रेटरी उसको बढी नजिक हुने वातावरण बनेको छ । र दोस्रो, केही महिनाको अन्तरालमा सुहेबले उक्त केटीलाई भगाएर जनकपुर पु¥याएको र बिहे गरेको खबर छ ।
लाग्छ, मान्छे आफ्नै प्रवृत्तिको प्रतिछाया पच्छ्याइरहेको हुन्छ । काठमाडौँमा विद्यमान अनेक रङ्गीन र सुनौला सत्यहरूबीच रमेशको जीवन सधैँ विसङ्गत पात्र र परिवेशसँगै मात्र ठोक्किइरहेको छ । लाग्छ, ऊ आफ्ना खण्डित सपनाको खण्डहरमा केवल यस्तै पात्रहरूलाई मात्रै भिœयाउन सक्छ । यसको व्याख्या सायद समानधर्मी मानसिक अद्वेगहरूको आकर्षण भनेर गर्नुपर्ला ।
सुहेबको पछिल्लो कर्तुतपछि विक्षिप्त र आहत बनेको हरिश बढी नै पिउन थालेको छ । उसको पिउने, र सुखदुःख साट्ने साथी, फेरि पनि, रमेश नै हो । रमेशको भने आशा र उज्योलोको केन्द्र हीरा हो यद्यपि, उनीहरूको सम्बन्धमा एउटा सार्थक अभिव्यक्तिका लागि चाहिने साहसको कमी छ ।
यसैबीच एक दिन हीरा रुँदै रमेशलाई आफ्नो कोठमा बोलाउँछे र भन्छे — उसको पेटमा सुहेबको बच्चा हुर्कंदै छ । यो सूचना रमेशको जीवनमा विद्यमान सम्भावनाको धिपधिपे बत्तीको अवसान हो । उसँग लाचारीबाहेक केही छैन । ऊ निःशब्द आफ्नै अँध्यारो कोठामा फर्कन्छ, जहाँ अरू केही छैन, फगत रक्सीका बोतल, चुरोट र केही थान लुगा, केही अखबार र फोटोबाहेक । अँ, रूपा सम्झाउने औँठी र रुमाल पनि कतै छ — सन्दर्भ गुमाइसकेको कुनै पुरानो समाचारजस्तो ।
रमेश र हरिशबीच एकसाँझ भएको मधुमय मिलनमा हीरा पुनः प्रवेश गर्छे, काखमा एउटा शिशु लिएर । रमेशको मनमा भने शिशुरको निर्दोष अनुहार र हीराको टिठलाग्दो अवस्था देखेपछि एकैचोटि प्रेम र पितृत्वको उभार नआएको होइन, तर हरिशको अभद्र व्यवहार र दुर्दुरका सामु उसको बोली फुट्न सक्दैन । हीरा पुनः कहिल्यै नभेटिने गरी हराउँछे । ऊ बस्ने गरेको घर, टोलतिर अथवा उसले उधारो खाने गरेका पसलतिर कसैलाई पनि खबर छैन ।
रमेश र हरिशका सपना सँगसँगै टुटेका छन् । उनीहरू दुवैसँग सम्झन लायक कुनै अतीत छैन, र बाँच्न लायक कुनै भविष्य पनि छैन । वर्तमान भन्नु एउटा रिक्तता हो उनीहरूका लागि । उनीहरू दिनचर्यालाई मदिरा र चुरोटमात्रले पनि न्याय गर्न सकिरहको छैनन् ।
र यसैबीच अर्को खबर छ— रेसेप्सनिस्तले सुहेबको हत्या गरिदिई । अखबारमा खबर चापिएको छ ।
हरिशको जीवना जबर्जस्ती तानिएको प्रसङ्ग हो यो । तर हरिशलाई जस्तौ उसलाई पनि अपास खुसी तुल्याउँछ यस खबले । हरिशको जीवनमा भने यो अपार खुसीको बिस्फोट पनि हो, र जीवनका बँचेकुचेका अर्थहरूको अवसान पनि हो । त्यसैले ऊ भन्छ, “दाइ, यो रक्सी र चुरोटले तलतल नै मेटिन छोड्यो । अब सुई लगाउनुपर्छ ।”
यस पुस्तकले घनीभूत विमर्शका लागि केही कुरा अगाडि सारेको छ । पहिलो, अनेकानेक सकारात्मकता, संभावना र सुन्दरताका बीचमा रहेर पनि कुनै मान्छे अन्तरमनको गहीराइमा कुनै अपूरणीय घाउ बोकोर बाँच्छ भने उसले त्यो उज्यालो कहिल्यै पनि पहिल्याउन सक्दैन । अर्को कुरा, समान गन्थ्री भएका मान्छे आश्चर्यजनक रूपमा एकअर्काको निकट आइपुग्छन् । असमान गन्थ्रीको विद्यमानतामा त्यो निकटता सम्भव पनि हुँदैन । यसले, पुनः थ्योरी अफ अटे«क्सनलाई बल दिन्छ — तिमीले उत्कट चाहनाले पछ्याएको चीज तिमी प्राप्त गर्न सक्छौ । अस्तित्वको लडाइँमा पलायनको बाटो लागेका रमेशहरू, स्वभावैले पूर्ण सचेतनाका साथ विसङ्गति खोज्छन् । र, भेट्टाउँछन् पनि । नत्र, काठमाडौँको विशाल चक्रव्यूहमा रमेशले हरिश भेट्नु, सुहेब भेट्नु, उसकी सेक्रेटरी भेट्नु, हीरा भेट्नु र यी सबैलाई अलिकति वासना, अलिकति धोकाधडी, अलिकति असफलता र धेरै नैराश्यको धागोले एकै ठाउँ ल्याएर उभ्याउनु — यो फगत एक संयोगमात्र हुन सक्दैन ।
उपन्यासको प्रमुख पात्र हो रमेश । कथा उसको हो । अन्य पात्र भने आआफ्ना चोट, असफलता, गुनासा, विकृति, वासना र हार लिएर उसको आफ्नै जीवनबोधलाई टेवा पु¥याउन र अझ नकारात्मक बनाउन आइपुगेका छन् । उसलाई जीवनको उज्यालोबाट झन् झन् अँध्यारोतिर धकेल्न आइपुगेको छन् । काठमाडौँको झलझल उज्यालो नदेख्नु, र यहाँका असल्ल छरिएका अवसरहरू टिप्न नसक्नु उसको लाचारी होइन, छनोट हो, चयन हो । कारण, जुन विक्षिप्तताको ताप उसको छातीभित्र छ, त्यसको आगोलाई त्यो भन्दा पनि अझ बलियो आगोले मात्रै समन गर्न सक्छ भन्ने उसको आत्मबोध छ । यसैबाट व्याख्यातित हुन्छ — ऊ किन सल्किएको चुरोटको टुप्लोले आफ्नै छाती घोचिरहन्छ दिनदिन । जीवनबाट र उज्यालोबाट पलायन हुन तयार, एक आत्मघाती दुव्र्यसनमा पसिसकेको मान्छे कसैगरे उज्यालेमा फर्कन चाहँदैन । मनोविज्ञानको यस कालो यथार्थको रूपक अलङ्कार हो रमेश ।
रमेशलाई केन्द्रमा राखेर वा रमेशको दृष्टविन्दुबाट यस उपन्यासलाई पढिरहँदा, र उसलाई एउटा चिन्तनशील र भावुक पात्रको रूपमा हेरिरहँदा पाठकले एउटा गल्ती गरे भने उनीहरू निराश हुनेछन् । सो के भने, अन्य आख्यानमा नायकहरूमा खोजिने जिम्मेवारीबोध रमेशमा पटक्कै भेटिँदैन । ऊ जिम्मेवारीको लायक भएर पनि गैरजिम्मेवार छ । त्यसै कुराले कथाको सम्पूर्ण दुखान्त पक्षको भार बोकिदिएको छ । रमेश अति गैरजिम्मेवार पात्र हो । यी प्रश्न बेकार छन् उसका अगाडि — रूपासँगको प्रेमकथा त्यहाँसम्म अगाडि बढिसकेको र गाइँगुइँसम्म चलेको अवस्थामा उसले रूपालाई गाउँमै छोडर सहर पस्न मिल्थ्यो? हीरामा रूपाको झल्को देखेर ऊतिर आकर्षित भएको मान्छेले त्यसै रेस्टुराँकी रिसेप्सस्टितिर पनि आँखा लाउन मिल्छ? त्यसै हीरालाई अफिसमा हप्कीदप्की गरिरहेको सुहेबलाई भेटेपछि “अफिसमा बसिरहनु आफैँलाई उचित नगालेपछि म आफिसबाट बिदा मागेर डेरा फर्कन्छु” भन्दै एउटा नैतिक जिम्मेवारीबाट लुसुक्क भाग्न मिल्छ? त्यस्तो पानिमरुवाले फेरि पनि हीरालाई माया गर्छु भनिरहन मिल्छ? कुनै सडकबालकलाई कुकुरले लखेटिरहेका र बालक चित्कार गरेर रोइरहेको झ्यालबाट देखेपछि “मलाई झोँक चल्यो, गएर झ्याल बन्द गरिदिएँ” भनेर उम्किन मिल्छ? चिया पसलमा दुःख गरेर काम गरिरहेका केटीहरूको दुर्दशा देखेँ भनेर संवेदिन हुने उसले चिया लिएर आएकी केटीको “कम्मरमा हात राखेँ अनि उसको गालामा बिस्तारै म्वाँइ खाएँ” भन्न मिल्छ? आफ्नो गर्भमा सुहेबको बच्चा छ भन्दै रुँदै शरण र सहयोग माग्न आएकी हीरालाई माया गर्छु पनि भन्ने र केही नगरी, कुनै आश्वासन, सहयोग वा सन्त्वनासम्म पनि नदिई “उसले पस्केको भात जुठो मात्र लगाएर म डेरातिर फर्किएँ” भन्न मिल्छ? आखिर बलात्कारको कहर कस्तो हुन्छ, उसले पनि बुझेके छ रूपाको सन्दर्भमा? आफूले सोचेजस्तो भएन भन्दैमा पर, ठेलामा चटपटे बेच्दै गरेकी केटीलाई लाग्नेगरी ढुङ्गा हान्न मिल्छ? समाजिक मर्यादा र मानवअधिकार पनि त होला नि देशमा? काखमा दुधे बालक लिएर आएकी हीरालाई “अपनाउँछु” भन्ने मनमा हुँदा हुँदै हरिश चित्यायो भनेर लुसुक्क परेर भिजाको बिरोलोजस्तो भएर “उसलाई हेर्दै नहेरी निस्फिक्री चुरोट उडाउन थालेँ” भन्न मिल्छ? आखिर, अलिपछि उसले आफैँ भनेको छ नि, “हरिश त्यहाँ नहुँदो हो त त्यो बालकलाई म सहर्ष स्वीकार गर्ने थिएँ ।” पछि एउटा प्रसङ्गमा उसले हीरालाई भनेको छ, “हीरा, किन रुन्छ्यौ? तिमी यसरी काँतर बन्न हुन्न । अब समाजसँग लडेर भए पनि तिमीले यस बालकलाई हुर्काउनुपर्छ ।” तर ऊ आफू अन्यायी समाजसँग लड्नुभन्दा भागेको होइन? काँतर भएको होइन?ःपलायनवादी होइन? न्यायका लागि सङ्घर्ष गर्नुभन्दा चुरोट र रक्सीमा लगेर जीवन बुझाएको होइन?
प्रतिनायकहरूको प्रयोग साहित्यमा नयाँ होइन । तर प्रतिनायकहरू पनि एउटा लक्ष्य बोकेर, त्यसको ध्याउन्नमा प्रतिनायकत्व ग्रहण गर्न पुगेका हुन्छन् । “सम्मोहन” को केन्द्रीय पात्र एउटा शून्यवादी प्रतिनायकजस्तो पनि लाग्दैन । शून्यवादी प्रतिनायकले संसारको अन्य कुनै पनि सत्ता वा शक्तिमा विश्वास त गर्दैन, तर ऊ आफ्नै फ्रि विल अर्थात् निरपेक्षा इच्छाशक्तिमा विश्वास गर्छ र जहाँसम्म सम्भव छ, सङ्घर्ष गरिरहन्छ । आस्तित्विक प्रतिनायकको स्वभाव हो — आफ्नो मूल्य, लक्ष्य वा सपनाका लागि एक्लै, अन्तिमविन्दुसम्म लडिरहनु, र त्यसका लागि नराम्रो नै किन नहोस्, बाटो अख्तियार गर्नु । तर, रमेश त्यस्तो छैन । खासमा, उसको कुनै निरपेक्षा इच्छाशक्ति पनि छैन । र हातमा अवसरै अवसर छन्, तर तिलाई टिप्ने कुनै जाँगर पनि छैन । सबै, सबै कुरा थाह छ, तर आफूलाई लयमा ल्याउनका लागि रमेशले दुई पैसाको ऊर्जा, अठोट वा इच्छाशक्तिको लगानी गरेको देखिँदैन । ऊ एउटा गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील पात्र हो । सायद ऊ एउटा साइबोर्ग–प्रतिनायक हो ।
र भुवनले एउटा प्रश्न यहाँ पुगेर छोडेका छन् — दुःख परेको मान्छे पनि फेरि उठ्छ । फेरि बोरिन्छ । तर रमेशजस्ता कतिपय मान्छे कहिल्यै उठ्दैनन् । अँध्यारोसँग टाँस्सिइरहन्छन्, र रातमा विलय भएर जान्छन् । को जिम्मेवार छ यसका लागि?
उपन्यासकारसँग नेपाली सामाजिक सङ्कथनले निर्माण गरेका कतिपय मान्यताका कारण उनका मस्तिष्कमा बस्न आइपुगेका केही समान्य भूलहरू छन् । उनका विचार धेरै पुरुषकेन्द्री छन्, । रमेश गाउँबाट पत्रकारिताका लागि सहर हिँड्ने सन्दर्भमा समाख्याता भन्छन्, “धम्की र आतङ्कका बीच पनि पत्रकारिता गर्न सक्ने निर्भीक पुरुष नै सही अर्थमा पत्रकार हो ।” यसो भनिरहँदा नारी पनि पत्रकार हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का उनको दिमागले पु¥याएन । प्रत्येक सुन्दर नारको चित्रण गरिरहँदा, उही पारम्परिक शैलीमा “आकर्षक नितम्ब, अलिकति उठेको छाती, पातलो कम्मर, लामो कद, गोरो बहाल श्यामवर्ण” आदि भनेर “सुन्दरताको” पुरुषवादी र भगोवादी मान्यता यहाँ पनि आएको छ । सौन्दर्यको फेरिँदो समयको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराबाट निवृत्ति लिनु पर्दछ । र अलि सुन्दर महिला देखिसक्दा आकर्षित भइहाल्ने, लहसिइहाल्ने, कसैको हाँसो “एउटा रहर बनेर मनमस्तिष्कमा घुम्ने” वा उसको कपाल “एउटा चाहना” बनेर आउने विकृत सोचलाई समान्यीकृत त के अनुमोदनसम्म पनि गर्नु अहिलेको समयको सन्दर्भमा अमानक हो ।
अरू पनि छन् बेमेलहरू । रमेश आफँै पत्रकार छ, अझ भनौँ सम्पादक छ, तर बेनर न्यूज नै बन्ने र पहिलो पृष्ठमा फोटोसहित छापिने समाचारको जानकारी पनि हकरले दिन्छ । उपन्यासमा, रमेश गाउँ छोडेर काठमाडौँ जाने बेला उसको र रूपाको लामो सम्वाद छ । रमेश त पढेलेखेको मान्छे, बोलचालमा उसले बोलेको भाषा स्तरीय र मानक होला, तर रूपलाले त्यहाँ लेख्य भाषाजस्तो बढो साहित्यक, प्राञ्जल र बिम्बात्मक भाषा बोलेकी छिन्, जुन स्वाभाविक लाग्दैन । र अन्तिम कुरा, माओवादी द्वन्द्व चिर्कएको बेला नेपालका गाउँहरूमा न्यायनिसाफका पुराना मान्यता भत्किएका थिए । रमेशकै गाउँमा द्वन्द्वले आक्रान्त थियो भनिएको छ । त्यस्तो बेला, सामन्तहरूले एकपक्षीय निर्णय गरे, र रूपा र उसको परिवारलाई अन्यायमा पारी काजीको छोरोलाई उन्मुक्ति दिए, र पछिसम्म पनि उसलाई त्यो दादागिरी जारी राख्ने वातावरण भयो भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन । त्यसताका नेपालका गाउँहरूमा माओवादीको पकड थियो र सामन्तहरूको उठिबास थियो ।
म चाहन्छु भुवनको जादूयी कलमले अर्को कृतिमा यी ससाना र नगण्य भूलहरूलाई सच्याओस् । उनलाई नेपाली आख्यनको पटमा उज्वल नक्षत्र बनेर चम्कन केहीले पनि रोक्न सक्दैन । उनले अध्ययन र साधना जारि राखे पुग्छ ।
Tags: महेश पौड्यालःसम्मोहनः एक प्रतिनायकको अन्तरकथा